भरतपुरमा गठबन्धन हार्दैछ, प्रचण्डको धम्की त्यही पराजित मानसिकताको उपज होः पद्मा अर्याल – Annapurna Post News
भरतपुरमा गठबन्धन हार्दैछ, प्रचण्डको धम्की त्यही पराजित मानसिकताको उपज होः पद्मा अर्याल
May 10, 2022 sujaLeaveaComment on भरतपुरमा गठबन्धन हार्दैछ, प्रचण्डको धम्की त्यही पराजित मानसिकताको उपज होः पद्मा अर्याल
काठमाडौं, २७ वैशाख । नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले नेपाली कांग्रेस कमजोर भएकाले नै अरु दलको सहायता लिएको बताएकी छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेतृ अर्यालले भनिन्, “देशभरि आमने सामने हुने दल भनेको नेपाली कांग्रेस र एमाले हुन् । तर एमाले दह्रो भएकाले उसले एक्लै जाने आँट गरेन र गठबन्धनको सहारा लिएको हो ।
उसले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेको प्रस्ट छ । जो कमजोर छ, उसैले सहायता लिने हो ।”नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पनि गठबन्धनको पराजय हुने निश्चित देखिएको उनले दाबी गरिन् । अर्यालले भनिन्, “प्रचण्डले भरतपुरमा नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीलाई गालीगलौज गरे, आफ्नी छोरीले नजिते मुलुकमा द्वन्द्व हुन्छ भने धम्काए । यो नै गठबन्धनको हारको मानसिकताको उपज हो हो । हामीले हारे मुलुक संकटमा पर्छ भन्नुको अर्थ जनताले थाहा पाइसकेका छन् । कांग्रेसले नजिते बजेट पठाउँदैनौं भन्ने प्रधानमन्त्री पत्नीको अभिव्यक्ति पनि त्यसकै उपज हो ।”
आफ्नो पार्टीले पुरानो शाख जोगाउने मात्र नभई बढोत्तरी गरेर लाने दाबी पनि एमाले सचिव अर्यालले गरिन् । उनले भनिन्, “एमालेको पक्षमा जनलहर उर्लंदो छ । धेरै मानिस पार्टी प्रवेश गरेका छन् । ५ दलको गठबन्धन एकातिर, एमाले अर्कातिर भएर हेर्दा पनि हाम्रै पल्ला भारी छ । हामीले अनेक प्रतिकूलताका बीचमा शाख जोगाउने मात्र होइन, बढोत्तरी गरेर जाने हो । जनतालाई विकल्प छ, अस्थिरताको संवाहकहरुलाई रोज्ने कि स्थिरताको संवाहकलाई रोज्ने ? अब एमालेको विकल्प छैन ।”
महिला उम्मेदवारीको सवालमा नेपाली कांग्रेस असंवेदनशील र अनुदार रहेको टिप्पणी पनि उनले गरिन् । अर्यालले भनिन्, “नेकपा एमाले महिला उम्मेदवार सबभन्दा धेरै उठाउने पार्टी हो । हामीले हिजोभन्दा संख्या बढाएका छौं । तर गठबन्धनबाट कानुनले गरेको प्रबन्ध पनि कुल्चने भयो । यो गम्भीर बहस हो । नेपाली कांग्रेसका निम्ति यो लज्जाजनक विषय हो । यसले ऊ महिलाप्रति संवेदनशील छैन । ऊ महिलाप्रति अनुदार छ भन्ने देखाएको छ ।”
यस्ता लक्षणहरु देखिए तत्काल जचाउनुहोस् मिर्गौंला..
आज तोलामा ७ सय घट्यो सुन, कतिमा हुँदैछ कारोवार ?
काँग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी सिर्जनालाई दिने भयो गठबन्धनले काठमाडौँको मेयरको टिकट
माधव नेपाल मतदानस्थल पुग्दा ‘चोर आयो चोर भन्दै’ गुञ्जियो रौतहट
May 15, 2022 suja
काठमाडौंको उपमेयरमा सुनिता डंगोलको निकै फराकिलो अग्रता
May 14, 2022 suja
सर्वोच्चले यौन व्यवसायलाई पेशाको मान्यता दियो : यौनकर्मीलाई पक्राउ नगर्न, सजाय नदिन आदेश
मत जित्न सकिन, महानगरवासीको मन जितेँ : सिर्जना सिंह
विश्व थाइराइड दिवस : ‘समयमा उपचार गरे जटिल बन्दैन थाइराइड’
२३४२६ मतको फराकिलो अन्तर सहित काठमाडौंको मेयरमा बालेन साहको अभूतपुर्व जीत
पल शाहकै कानुन व्यवसायीको आग्रहमा आज हुने मुद्दाको सुनुवाई फेरि सर्‍यो